STI Myanmar University သည် မိတ်ဖက်တက္ကသိုလ်များဖြစ်သည့် University of Bedfordshire (UK) ၊ Mahidol University, Thailand တို့နှင့် လက်တွဲ၍ BEng (Hons) Civil Engineering, BEng(Hons) Architectural Engineering, BEng(Hons) Civil Architectural Engineering , BEng(Hons) Electronic Systems Engineering and BSc(Hons) Construction Management မေဂျာများကို သင်ကြားပို့ချပေးလျှက်ရှိရာ ထိုင်းနိုင်ငံ Mahidol University အင်ဂျင်နီယာဌာန မှ ပါမောက္ခများ၊ တွဲဖက် ပါမောက္ခ များလာရောက်၍ Engineering ကျောင်းသား/သူများအတွက် Seminar များ ၊ Workshopများ သင်ကြားပို့ချပေးလျှက်ရှိပါသည်။
၂၀၂ဝခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ (၇)ရက်နေ့ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ Mahidol University မှ Asst.Prof Dr.Wasaporn Techapeeraparnic နှင့် Asst.Prof. Dr.Trakarn Prapaspongsa တို့သည် Faculty Engineering Seminar ကို နေ့လည် (၁) နာရီမှ (၃)နာရီအထိ လှိုင်မြို့နယ်၊ MICT park အတွင်းရှိ STI Myanmar University တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းSeminar တွင် Asst.Prof Dr.Wasaporn Techapeeraparnic မှ “ Trends in Public-Private Partnership Infrastructure in Thailand ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ခေတ်မီတိုးတက်လာသည်နှင့် အမျှ မြို့တစ်မြို့အတွက် Infrastructure က မည်မျှ အရေးကြီးကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံကို နမူနာယူပြီး ကားလမ်းအခက်အခဲပိတ်ဆို့မူတွေ မဖြစ်အောင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ကြကြောင်း၊ MRT, BRT ရထားလမ်းများအကြောင်း နမူနာများဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး Asst.Prof. Dr.Trakarn Prapaspongsa မှ “Engineering for Sustainability” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အဆောက်အဦးများဆောက်လုပ်သော အခါ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်အောင် မည်ကဲ့သို့ ဆောက်လုပ်သင့်ကြောင်း ၊ Society ကိုတိုးတက်အောင်မည်သို့ ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ ပါသည် ။ ထို့နောက် ၂၀၂ဝခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ (၈) ရက်နေ့ Chatrium Hotel တွင်ပြုလုပ်မည့် Mahidol University ၏ Master ဒီဂရီ များအတွက် Scholarship Program များအကြောင်းပြုလုပ်မည့် “One-Site Interview & Active Recruitment” သို့လည်း တက်ရောက်နိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်း Workshop သို့ STI Myanmar University ကျောင်းသား /သူများနှင့် ပြင်ပမှ စိတ်ပါဝင်စားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။